Gabateecuqoo Fayyadamuun Tarree ykn Tarjaa kan Gabatee Ida'uu fi Haquu
Tarree ykn tarjaa gabatee keessaa ida'uu fi haquu nidandeessa, akkaasumas gabateecuqoo fayyadamuun man'eewwan gabatee addaanbaasuu ykn makuu nidandeessa.
Tarree haaraa gabatee keessatti saaguuf, qaree man'ee gabatee keessa oolchiitii, Dirqala Alt+Ins dhiibi, kana booda furtuu xiyyaa olii yk gadii gad dhiibi. Akkaasumas qaree gara man'ee dhumaa, gabatee keessaatti siqsuu, kana booda Taabii gad dhiibuu nidandeessa.
Tarjaa haaraa saaguuf, qaree man'ee gabatee keessa oolchiitii, Dirqala Alt+Ins dhiibi, kana booda furtuu xiyyaa bitaa yk mirgaa gad dhiibi.
Tarjaa ida'uu osso hintaanee, man'ee gabatee addaanbaassuuf, Dirqala Alt+Ins dhiibi, kana booda yammuu furtuu xiyyaa bitaa yk mirgaa gad dhiibduu, Ajaja Ctrl gad dhiibi.
Tarree tokko haquuf, qaree man'ee gabatee keessa oolchiitii, Dirqala Alt+Del dhiibi, kana booda furtuu xiyyaa olii yk gadii gad dhiibi.
Tarjaa tokko haquuf, qaree man'ee gabatee keessa oolchiitii, Dirqala Alt+Del dhiibi, furtuu xiyyaa isa bitaa yk mirgaa gad dhiibi.
Gabatee man'ee isa dhiihoo keessatti makuuf, qaree man'ee gabatee keessa oolchiitii, Dirqala Alt+Del dhiibi, Ajaja Ctrl gad dhiibitii, furtuu xiyyaa isa bitaa yk mirgaa gad dhiibi.
Gabateecuqootiin, Tarreewwanii fi Tarjaawwan haarmsuu
Gabatee Barruu keessatti, Tarreewwanii fi Tarjaawwanii hagamtaa jijjiiruu
Man'eewwan Makuu fi Addabaassuu
Title is: Gabateecuqoo Fayyadamuun Tarree ykn Tarjaa kan Gabatee Ida'uu fi Haquu